Ikweetiga Guinea - Gpedia, Your Encyclopedia
Isuduwe: 1°30′N 10°00′E﻿ / ﻿1.500°N 10.000°E﻿ / 1.500; 10.000
- Taakiikh 12 Oktoobar, 1968
- Total 28,051 km2 km²
- 2009 qiyaas 676,000[
Guinea ama Jamhuuriyadda Ikweetiga Guinea, waxee ka mid tahay wadamada ugu yar Afrika.Waxeena ku taalaa galbeedka bartamaha Afrika. Xuduudaha Guinea (Isbaanish: Guinea Ecuadorial, [Faransiiska: Guinée équatoriale, Portuguese: Guinea Equatorial), si rasmi ah Jamhuuriyadda Equatorial Guinea (Isbanishka: Republika Guinea Ecuatorial, Faransiiska: République de Guinée équatoriale, Portuguese: República da Guiné Equatorial) , [b] waa dal ku yaalla Bartamaha Afrika, oo leh 28,000 kilomitir oo isku wareeg ah (11,000 sq m). Xubinimadii hore ee Guinea Isbaanish, magaceedu wuxuu madaxbannaanaa wuxuu ka dhigayaa meel u dhow labada Equator iyo Gacanka Guinea. Equatorial Guinea waa gobolka keliya ee madaxbannaan ee Afrikaanka ah ee Isbaanishku yahay luqad rasmi ah. Laga soo bilaabo 2015, waddanku wuxuu ku qiyaasay dad lagu qiyaasey 1,222,245.  Equatorial Guinea waxay ka kooban tahay laba qaybood, qoto-dheer iyo dhul-beereed. Goobta qulqulka ahi waxay ka kooban tahay jasiiradaha Bioko (oo horey u ahaan jirtay Fernando Pó) ee Gacanka Guinea iyo Annobón, oo ah jasiirad yaryar oo yar yar oo ka mid ah waddanka koonfurta ee xuduudaha. Bioko Island waa qaybta waqooyiga ugu badan ee Equatorial Guinea oo ah meesha uu ka yahay caasimadda dalka Malabo. Jasiiradda São Tomé iyo Príncipe waxay ku taalaa Bioko iyo Annobón. Gobolka dhexe, Río Muni, waxaa xuduud u leh Cameroon oo waqooyiga iyo Gabon koonfurta iyo bariga. Waa meesha Bata, Magaaladda ugu wayn ee Guud ee Equatorial Guinea, iyo Oyala, caasimadda mustaqbalka ee qorshaysan. Rio Muni waxa kale oo ku jira jasiirado yar oo yaryar, sida Corisco, Elobey Grande, iyo Elobey Chico. Wadanku waa xubin ka mid ah Midowga Afrika, Francophonie, OPEC iyo CPLP. Tan iyo bartamihii 1990-yadii, Equatorial Guinea waxay noqotay mid ka mid ah kuwa soo saara saliida ugu weyn Afrika ee Saharan. Waa dalka ugu qanisan dadka Afrikaanka ah,  iyo waxsoosaarka guud ee gudaha (GDP) ee loo qoondeeyay sinaanta awoodda wax iibsiga (PPP) ayaa lagu qiimeeyaa 43 qof oo adduunka ah
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ikweetiga_Guinea&oldid=178312"